Xinhua Myanmar - အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ဆူလာဝေစီပြည်နယ်၊ မာမူဂျူမြို့တွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သော ငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၉၆ ဦးအထိရှိလာ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ဆူလာဝေစီပြည်နယ် မာမူဂျူမြို့တွင် ပမာဏ ၆.၂ ရှိသော အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက် အပျက်အစီးများကြား၌ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ကယ်ဆယ်ရေးသမားများနှင့် အနံ့ခံခွေးကို ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)	Asia
မာမူဂျူ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိ ဒေသများ၌ အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်မှုနှင့် ရေဖုံးလွှမ်းမှုများကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာ ၉၆ ဦးအထိ ရှိလာခဲ့ကြောင်း ၊ လူဦးရေ ၇၀,၀၀၀ နီးပါး နေရပ်စွန့်ခွာခဲ့ရပြီး ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ၌ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ရကြောင်း အမျိုးသား သဘာဝဘေးစီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီက ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ဆူလာဝေစီပြည်နယ် မာမူဂျူမြို့တွင် ပမာဏ ၆.၂ ရှိသော အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက် အပျက်အစီးများကြား၌ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ကယ်ဆယ်ရေးသမားများနှင့် အနံ့ခံခွေးကို ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ဆူလာဝေစီပြည်နယ် မာမူဂျူမြို့တွင် ပမာဏ ၆.၂ ရှိသော အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ၏ ရုပ်အလောင်းကို ရှာဖွေရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး(SAR) အဖွဲ့က သယ်ဆောင်လာသည်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ဆူလာဝေစီပြည်နယ် မာမူဂျူမြို့တွင် ပမာဏ ၆.၂ ရှိသော အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက် ပျက်စီးသွားသည့် အဆောက်အဦများ၌ ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့် ရှာဖွေရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး(SAR) အဖွဲ့ကို ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ဆူလာဝေစီပြည်နယ် မာမူဂျူမြို့တွင် ပမာဏ ၆.၂ ရှိသော အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက် ပျက်စီးသွားသည့် ဟိုတယ်တစ်လုံးကို ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အနောက်ဆူလာဝေစီပြည်နယ်တွင် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်နှင့် ၁၅ ရက်၌ လှုပ်ခတ်သော အင်အား ၆.၂ ရှိသော အင်အားပြင်းငလျင်နှင့် အင်အား ၅.၉ ရှိသော နောက်ဆက်တွဲငလျင်များကြောင့် သေဆုံးသူ ၈၁ ဦးရှိခဲ့ပြီး တောင်ကာလီမန်တန်ပြည်နယ်၌ ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်မှစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရေလွှမ်းမိုးမှုများကြောင့် လူ ၁၅ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း အေဂျင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Raditya Jatiက ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
1-2(210118) -- MAMUJU, Jan. 18, 2021 (Xinhua) -- Rescuers andasniffer dog search in the ruins aftera6.2-magnitude earthquake in Mamuju, West Sulawesi, Indonesia, Jan. 18, 2021. The death toll fromastrong earthquake and floods in the central parts of Indonesia has risen to 96, with nearly 70,000 people forced to flee home and take shelter, the National Disaster Management Agency said Monday.
A total of 81 people were killed after the 6.2-magnitude quake and the 5.9-magnitude aftershock struck West Sulawesi province on Thursday and Friday, and 15 people were reported dead in South Kalimantan province as floods have hit the province since Jan. 14, the agency's spokesman Raditya Jati said. (Photo by Opan/Xinhua)
3-4(210116) -- MAMUJU, Jan. 16, 2021 (Xinhua) -- Members of the Search and Rescue (SAR) team evacuate the body ofavictim duringasearch operation on damaged buildings aftera6.2-magnitude earthquake in Mamuju, West Sulawesi, Indonesia, Jan. 16, 2021. More than 800 people were wounded and about 15,000 others took shelters asa6.2-magnitude quake, which hit Indonesia's West Sulawesi province on Friday, massively destroyed houses and infrastructures,adisaster official said here on Saturday. (Photo by Opan/Xinhua)
5-10(210116) -- MAMUJU, Jan. 16, 2021 (Xinhua) -- Members of the Search and Rescue (SAR) team carry outasearch operation on damaged buildings aftera6.2-magnitude earthquake in Mamuju, West Sulawesi, Indonesia, Jan. 16, 2021. More than 800 people were wounded and about 15,000 others took shelters asa6.2-magnitude quake, which hit Indonesia's West Sulawesi province on Friday, massively destroyed houses and infrastructures,adisaster official said here on Saturday. (Photo by Opan/Xinhua)
11-(210116) -- MAMUJU, Jan. 16, 2021 (Xinhua) -- A damaged hotel is seen aftera6.2-magnitude earthquake in Mamuju, West Sulawesi, Indonesia, Jan. 16, 2021. More than 800 people were wounded and about 15,000 others took shelters asa6.2-magnitude quake, which hit Indonesia's West Sulawesi province on Friday, massively destroyed houses and infrastructures,adisaster official said here on Saturday. (Photo by Opan/Xinhua)
Previous Article ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ် “ ပန်းခြံစာသင်ကျောင်း ” ၌ ပါကစ္စတန်ကလေးငယ်များ တက်ရောက်သင်ကြား
Next Article တရုတ်နိုင်ငံထုတ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတာတေး ချီးကျူးပြောကြား